PHP 7 dia misy ary ny fanavaozana lehibe indrindra tao anatin'ny taona | Famoronana an-tserasera
Mandritra ny fito taona misesy PHP efa ilay fiteny fandaharana fahaefatra malaza indrindra eran'izao tontolo izao, izay nanomezan'ny PHP sakafo bebe kokoa noho ny Tranonkala 200 tapitrisa, ary aiza ny 81,7 por ciento tranokalam-panjakana mampiantrano PHP amin'ny mpizara azy.
PHP dia naka dingana lehibe amin'ny ho avy amin'ity herinandro ity miaraka amin'ny fanavaozana lehibe voalohany hatramin'ny 2004 rehefa navoaka ny kinova 5.0. PHP 7 manatsara be ny fampisehoana miaraka amin'ny fahombiazana avo telo heny noho ny PHP 5.6, rehefa mihazakazaka amin'ny WordPress CMS amin'ny mari-pahaizana sasany. Aorian'izay dia avelanay ho anao ny sary izay ahitàna ity fanatsarana lehibe ity.
Izy io koa dia misy fiovana kely hafa, toy ny fampiasana nampihena be ny fampiasana fitadidiana, fanambarana karazana fiverenana, ny mpandraharaha manokana ary maro hafa. PHP 7 dia misy fanovana minitra farany, toy ny fanesorana ny maody azo antoka PHP, "Magic quotes", andian-dahatsoratra teny lakile vaovao natokana ary fanovana hafa.
Midika izany fa ny rindrambaiko (CMS) toy ny WordPress dia mila havaozina ampahany mba ho vonona amin'ny famoahana amin'ny ho avy miaraka amin'ny PHP 7, na dia toa efa izao aza fanavaozana tanteraka mifanaraka.
raha mbola PHP 7 dia misy izao, azo inoana fa afaka taona vitsivitsy alohan'ny hampiasana azy an-tserasera. Ny rindranasan'ny tranonkala, indrindra ny rindranasa fandraharahana, dia mazàna maharitra taona maro vao manavao ireo kinova vaovao rehefa mivoaka ny fanavaozana vaovao.
Ny antenain'ny mpandraharaha tranonkala dia izany fanatsarana ny fampisehoana dia be dia be, ary izany dia hanampy amin'ny fakana fanahy ny fanavaozana aloha kokoa, na ny WordPress aza, ho toy ny lohahevitra na lohahevitra ampiasainay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » PHP » PHP 7 dia efa nivoaka izao ary izany no fanavaozana lehibe indrindra tao anatin'ny taona maro
Fanesoana Krismasy 17 izay tsy azonao hadino